August 12, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 19
HARGEYSA(P-TIMES)- Gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaridka ah ee Waddani C/rashiid Cabdi Jaamac ayaa ugu baaqay xukuumadda Somaliland in ay xil iska saarto dhalinyarada Somaliland oo uu sheegay in ay noqdeen qaar jeelalka ku xidhan iyo kuwo kale oo uu tilmaamay in ay u baxsadeen magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya.
Gudoomiye C/rashiid Cabdi Jaamac oo shir jaraa’id ku qabtay xarunta guud ee xisbiga Waddani ayaa sheegay in xukuumadda Muuse Biixi ay ku guul daraysatay ka war haynta dhalinyarada Somaliland.
Waxa uu sheegay in dhalinyarada Somaliland badankood ay u hayaameen dhanka magaalada Muqdisho halka kuwo kalena ay ku xidhan yihiin xabsiyada, isagoona xusay gudoomiyuhu in dowladdu aysan qaban muddo afar sano koobabkii is dhex galka dhalinyarada iyo tar tanadii loo qaban jiray taas badalkeedna ay sii badisay xidhida dhalinyarada iyo caga juglaynta lagu hayo.
Waxa uu sheegay in dhalinyarada Somaliland aysan helin hogaan ka war haya isla markaasna ay wax badan kusoo kordhin lahaayeen gudaha Somaliland, balse xilalka dowladda iyo xafiisyo oo kaliya aysan wax u tari karin dhalinyarada oo u baahan in il gaar ah lagu eego.
Dhalinyarada Somaliland ayuu ugu hambalyeeyey maalinta dhalinyarada aduunka, waxaana uu sheegay gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga Waddani in Somaliland uu kusoo badanayo maandooriyaha khamriga oo dhibaato xoogan ku haya bulshada deegaanka.
Dadka ajaaniibta ah ee imaanaya Somaliland ayuu sheegay in aanan lala socon xaaladooda, waxaana uu xusay gudoomiyuhu in xaalad halis ah uu ku jiro mustaqbalka dhalinyarada Somaliland.
“Hadii xukuumaddihii hore dhalinyarada ku sasabi jireen waxaad tihiin mustaqbalkii beri maanta waxaa halis ku jira mustaqbalkii wadanka oo ah dhalinyarada oo qaar Xamar u yaaceen qaarna xabsiyada ku jiraan qaab magafe u xidhan yihiin, halka aqoon yahankii iyo intii soo hadhay ay halis ugu jiraan inay nolosha ka dhacaan” Ayuu yidhi C/rashiid Cabdi Jaamac.
Xukuumadda Muuse Biixi ayuu tilmaamay in ay laashay mooralkii dhalinyarada iyo rajadii qaranka, isagoona sheegay in dhulkii danta guud ahaa ay xaraashtay dowladdu.
Waxuu ka booday (u badi in uu ku ceeb qarinayo ee) kumannaanka ka tahriibaysa ee ama ku lee’anaysa saxraha iyo badaha ama se xeryaha qaxootiga ee Giriigga iyo Talyaaniga ku dhex caddiban, iyo boqolaalka Yurubta ku saaqidday ka dib markii ay dalabkooda magangalyo ku guuldarreysteen ka dib markii ay lahjaddoodu kashiftay iyaga oo sheegtay in ay koonfurta ka soo jeedaan oo Al-Shabaab ka soo carareen. Qaar kale waxay ku fashilmeen iyaga oo astaanta ‘Somaliland’ meel kasta ku dhagsaday inta ay dacwaddu u socotay, ama se Soomaalida kale faduuliyay mise xafladaha magaca Soomaaliyeed loogu qabanayay gooni isaga faquuqay oo fowdo ka kiciyay.
Riwaayadda waalan ee meeshaas laga jilayo waa midda laga dheehan karo beelaha halka qabiil ka soo wada jeeda ee tafaraaruqooda axzaab siyaasadeed ku maldahday oo khayaalkaas is kugu dowladaneyn raba. Haddii Somalilandta la madhoodheeyo ay wax jira tahay waxay maanta ka caban lahaayeen dhalliinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa dowladaha deriska ah ee ku soo jirfanaya. Kuwoodu badaha iyo saxraha naftooda kuma aysan biimiyeen. Masiibada ugu darsantay ayaa ah in Woqooyi Galbeed ay Oromadu si xawli leh u dhaxal wareejinayso. Qarannimada keli ah ee ay ku waabariisan doonaan, sida ay ku sii siqayso, waa tan Itoobiya ee mid kale ma aha mar haddii ay Oromadu Hargeysa ku yeesheen Issim Guud oo cod dheer ku hadlaya.
Beenaale cadow ah, hooyadaa u sheeg Somalida dalkoodii ku noqda kuwa ugu badan weeye weligeedba waa la dhoofayey reer Somaliland Europe waxay galeen qarni horteed inan yar oo iska hadlay weeye waxaasi wer idiin noqon meyso Xamar waa Magaalo Irir Samaale Marti kaagama aha waa dalkoodii, markii 1991 lagugu xasuuqayey cidi mey taaban Hargeisa, Burco Berbera waa joogaan reer Muqdishu, sheeko kale keen, Xamar anaa leh Farmaajo ma leh Viva Irir Samaale, Viva Hawiye Viva Dir, Xamar Aqal Boodhari leeyahay maaha. Ka hadal Wasiir Cawed musuqiisa sheeko ciyaal inta ka hadlayso Puntland times
Duul caaytamay waa dulli laga dood badiyay. Mar ba magac ku soo daba dhuunta oo ku aflgaaddooda oo xumbada ku cuskada.
Very cheap propoganda, haday tageen Muqdisho oo lagu xidhay ma south Afrika ayay tageeen ? Binti-girl… naaa beeenta iyo propogaandhada iska daa
During a recent heated debate on the issue of an independent ‘Somaliland’ at a university hall, a critical question was posed to the highly animated pro-landers:
“In the event that Somaliland became a reality, could a Majeerteen or Mareexaan individual, born and bred within ‘Somaliland’, ever be allowed to occupy any of the highest offices of the state, or become its president?
The reply is anyone’s guess. To which the gobsmacked white lecturer reminded the frothing “landers” that all nations are obliged to sign up to and implement international laws on rights and anti-discrimination. All the passionate rhetoric by the “landers” about how ‘Somaliland’ would become the beacon of democracy in the whole of Africa suddenly evaporated into thin air.
War kuwaan Soomalilineka ah waa iska caytamayaan,
Diyaarad qanax ah ayay Meesha surteen
Let me ask you a question as well. When it comes to Somalia, can a Xabashi Born to a Somali woman who is born and bread in Somalia ever became President of Somalia?
Can you also answer Why The U.S. has in its constitution that a person who is born in the U.S. can became a President even if that person Was removed from the U.S. and was Raised in a different Country and a person who was porn outside of the U.S. but was brought there when he/she is 5 months old, bred within the U.S. and never visited any other country since then cannot aspire to hold the highest office?
“Let me ask you a question as well. When it comes to Somalia, can a Xabashi Born to a Somali woman who is born and bread in Somalia ever became President of Somalia?”
Sidaydii baan xaska qaraacay, misna halaqii aan filayay ayaa ba ka soo dhacay. Su’aashaas iyada ayaa toos isugu jawaabtay allaylehe. Ujeeddadii aan ka lahaa taas ayay ahayd, waadna ku mahadsantahay.
“Can you also answer Why The U.S. has in its constitution that a person who is born in the U.S. can became a President even if that person Was removed from the U.S. and was Raised in a different Country and a person who was porn outside of the U.S. but was brought there when he/she is 5 months old, bred within the U.S. and never visited any other country since then cannot aspire to hold the highest office?
Yet, any person of Isaaq descent would be able to hold any office and even serve as president in “Somaliland”, no matter where they were born or raised. Faysal Waraabe is the perfect example of this.
If you were intelligent enough, you’d have realized your self-contradiction in your flimsy argument based on the US. So, your citing of the US example makes no sense whatsoever and is a sting in your own tail.
This is the problem with a defective mind crippled by intoxicating tribalism; utterly delusional and out of touch with reality. I rest my case.
Cismaan fulleyga ayaa la ogyahay inuu arinta iyo xaaladuu ka baqo ka meereysto.
Hadaba niicda intaad naga dhaafto ka jawaab labadaas su’aalood een kugu horgooyay.
Waxaanu sugnaaba waa inaad si dhaba uga jawaabto adoon noo cantarabaqasheyneyn.
Markii aad doodda ku margatay ayaad sidaadii caay iyo jaa’ifeyn u dhuratay. Mar haddii aad ummaddaas dhan ee Soomaaliyeed qadafka intaas la’eg ku wareentay adiga ayaa noqday fulayga dooddii dhammayd deelqaaf kaga galgalshay oo in aan kula sii qasto damiirku isiin waa oo kana weyni maandhe.
Kun jeer baan kuu sheegay, anigu shakhsiyadda dadka ma durreemo oo beelaha islaameed ma duro. Xaasha. Naxligii aan la dacaraysnayd na waa aniga kaa soo matiyay oo waxa aad tahay la ogaa sidii ay ujeeddadu ba ahayd.
Naxligii AAD la dacaraysnayd na waa aniga kaa soo matiyay oo waxa aad tahay la ogaa sidii ay ujeeddadu ba ahayd.
And FYI, “Cismaan Cawad” ma aha magacayga rasmiga ah ee waa magaca jilibka aan ka dhashay ee “Reer Cismaan Cawad”.
Magacayga naanaystan baa kuugu dhow ee iska iimaanso. Can’t beat a 007, eh?
Bal adba! Waar dadow ninkani magaceyga kolka uu arko ayuu iska didaa. Bal halkeen imika ku caayay? Cismaan Aniga waxaad doonto ayaad iskaga key yeedhaa. Bogan oo keli ah bal inta jeer eed ilaaq,aflagaado iyo cayba iskugu dartey bal yara fiirso.
“xaska qaraacay, misna halaqii aan filayay ayaa ba ka soo dhaca”. Kelmada ‘HALAQ’ kolka guud waa bahal, kolka xigtana waa Mas. Sida shakhsi bina’aadmi loogu yeedhaana waa iyadoo lagu jaa’ifeynayo, caayayo, habranayo. Waa cay qayaxan.
“Kun jeer baan kuu sheegay, anigu shakhsiyadda dadka ma durreemo oo beelaha islaameed ma duro.”. Haye! Weedhahan aad isticmaashaa qadaf ma’ahan miyaa.
“If you were intelligent enough”. Hadaad caqli kugu filan leedahay, caamada iyo dadka aanay maskaxdoodu ku filneyn ayaa lagu yidhaa. Kolkaad aniga sidaas iila hadleysana dee wey iska cadahay in Caamo aad iigu yeedheyso.
“This is the problem with a defective mind crippled by intoxicating tribalism”. Tani waa dhibaatada haysata maskax ciladeysan taasoo ay curyaamisay sakhrada Qabyaaladu. Taasood ah ama ka dhigan iyada ood si dadban iigu yeedheyso inaan ahay qof dhibaato ka heyso sakhrada qabyaaladu.
Caydu mid toos laguugu yidhaa waxaasaa tahay iyo mid si dadban laguu yidhaaba waa isla halkeedii uun.
Hadaad si fool ka fool ah intaad isoo hor istaagtid aad xabad igu dhufatid iyo hadaad dhufeys dabadii iga soo toogatidba, labada goorba aduunbaa xabadii igu soo ridey. Labada goorba adaa I dhaawacay ina wiiqey.
Kolkaas miyaanad sakhsideyda dhowr goor meel kaga dhicin. Kol aad Halaq iigu yeedho, ko aad Caamo iigu yeedho, kolaad tidhaa Qabyaalad ayaa i sakhraamisay.
Hadaba aan anigu kuu cadeeyee waxaas oo dhan waxba kama qabo. Intaas iyo inta ka badan eed iigu yeedho ama igu mataasho kama jixinjixo. Soo badibaaban ku leeyahay. Horaa, hortaa qaar si qayaxan ii caayeen imikana la’i caayaa. Cay’i cidnaba meel daloosha kama gasho. Laakiinse anigu kama gabado oo anoon cidkale u aflagaadeyn isaga dartiisa ayaan ka abaal mariyaa wuxuu iga muteysto.
Laakiinse adigu waxaad jab ku dhigtey waxaad tahay sidii dhoocil yar oo kale. Adoo dadka cay aad go’ kusoo dadey u miisaya ayaad kelmad ama labo yaryar oo meel hoose ah marka lagugu soo ekeysiiyo, ka cabaadaa sidii daanka lagugu soo dhuftey adoo meelahaas dhusdhus leh. Kkkk
Caruurta qaarbaa belo ah. Intay hoosta ka qanjiidhiyaan caruurta kale ayaa kolka laga aargoostana ay iska oohisiiyaan. Aaaaaa wuu i qanjiidhiyay. Kkkk
Adigu kuwaas wax qanjiidhiya ee kolka iyagana mid la mid ah dhac lagaga siiyo ooya waad kasii daran tahay. Adigu iyadoon lagaaba aargoosan ayaad sii oydaa. Kkkkk
Waxaasina waa munaafaqnimo aanan meelnaba loogu soo gaban. Munaafaqnimaduna waa dabeecad walba oo shakhsi yeelan karo ta ugu xun. Munaafiqiintana waxa lagu yaqaan iney wax walba ka sineystaan. Ana kolkaan arko mid walba oo bahasha ka sineysanaya ayaan daaha ka feydaa si ay cidwalbaaba u aragto.
Koley waan ku ogahay oo oohinta iyo ilmada yaxaaska ood jagac kasiiso joojin meyside, xaarkan iyo dhuusadan aad soo raacineyso uun naga jooji.
Aniga ayaad i caayday ma oran ee jawaabtaada mucdeeda bal dib u dhuux iyo sida xun ee aad tolkayga iyo Soomaaliweyn ugu deelqaaftay. Waxaad islahayd u hoos dhig laakin dhakhsahaas la ii ma siro.
Waxaad ka wadday in ay Sooaalida kale, si kasta oo ay hooyo Isaaq ahi u dhashay, ay agtiina Amxaaro iyo wax sidood u liita ka yihiin. Xad aan loo dhowaanin baad ka dul tallawday oo doodda soo afjartay.
Intaas kale ee aad cabatay u fasiratay waa istilaaxaadka birdhigidda ee doodaha cilmiyeysan caadiga ka ah dunida oo idil, gaar ahaan waaxda fadhi-ku-dirirka. Haddii ay khibrad la’aan kaa tahay waan ka xumahay.
Waa ii xilli dambe ee nabadeey.
Intaas kale ee aad ka cabatay ee aad u fasiratay waa….
Sxbkeyga MAJEERSANGELIYOOW si’aanad imika u odhan waad I caydey ayaan aayar kuugu yara kaadinayaa. Kkkkk
Horta labadaas su’aalood eed ka gabatay hadafka iyo ishaarta aan kalahaa waxey aheyd in aan ku baro in Wadan Walbaaba waxa uu Dastuur ka dhigtaa ay ku dhaqmaan. Dastuur walbaabana uu yahay mid aanan dhameystirneyn. Dastuurrka keli ah ee dhameystirani waa Quraankeena Kariimka ah.
Imika intaanad Quraanka iyo Diinta ayaa sidaas yidhi adoo taada marsiisanaya aanad lasoo boodin, aan kuu sheegee dunidan qolo walbaaba buugyar ayay qoratey oo la yidhaa Dastuur. Kaasoo ah heshiisho iyo qaraaro ay wada gaadheen. Sax iyo khaladba heshiiskaas ayay isku dhaqaan.
Carabtu dadka ku dhex dhasha ee ku kora xitaa ma siiyaan dhalasho. Reer Galbeedkuna kaan ku dhalan wadankooda kursiga ugu sareeya wey ka xaaraantinimeeyaan. Myanmar na dadka Rohingyaha la yidhaa iyagoo meeshaa mudo badan ku noolaa Ab ka Ab waabay qixinayaan oo baro kicinayaan. Waxa loogu yeedhaa imika dad bilaa dal ah. Soomaaliya lafteeda Soomaali walba meeshuu doono haku dhashee xilka wuu qaban karaa. Iyadaa sidaas garatey, ikhtiyaarna wey u leedahay. Somalilandna waxey leedahay Qofwalba oo ka dhashay Qabiilada Soaliland dega meeshuu doonoba haku dhashee Madaxweyne wuu noqon karaan. Adigu imika Isaaq ayuunbaad soo qaadatey. Maxaad usoo qaadan weydey Qabiilada kalee Somaliland dega. Gadabgiirsiga, Ciisaha, Dhulbahantaha, Fiqishiniga, Warsangeliga, Gabooyaha iyo inta kalee degta meesha eenan magac dhegin?
Xitaa Jabuuti oonu Walaalo nahay adiga kuuma ogola inaad Madaxweyne ka noqotid halkaas ama ku dhalo ama haku dhalane. Laakiinse ninka Ciisaha ah meeshuu doono haku dhasho, Ethiopia, Somaliland ama meelahaas kalebee.
Kolkaas waa maxey sababta aad Isaaquun ugu dhegen tahay?
Cismaannow caawa adaa dabinka is gelinaya. Anigu jidgooyo ayaan kuu dhigay. Dabinse kuuma maleegin, xas mas baas oo i qaniinaa igaga soo baxo ama gudaafad jin iyo waxaanan garaneyn iga soo raacona habeenkii kuma waraageeleysto.
Inbadan baad ka cabataa inaanan cidina uurkaaga ku jirin. Adigu kolkaad turjumaadaas khaldan ka bixineyso qoraalkeyga ma uurkeyga ayaad ku jirtey?
Alle ayaa igu oge inaanan waxaas iyo wax la mid ah u jeedin. Qoraalkeyga sare ayaanan cadeyn u ah inaanan wax kale iyo hoosaasis aaney iga aheyn.
“Intaas kale ee aad cabatay u fasiratay waa istilaaxaadka birdhigidda ee doodaha cilmiyeysan caadiga ka ah dunida oo idil, gaar ahaan waaxda fadhi-ku-dirirka. Haddii ay khibrad la’aan kaa tahay waan ka xumahay”.
Intaas sare eed tidhina cayda ayaad ku xalaaleysaneysaa. Sidaan horeba u idhi, hadaad anoo ku arkaya i toogato iyo shiishkood igala soo ishaarato meel aanan kaa arkeyn labadiiba waad isla toogasho uun.
Anna kaama cabane soo badi baaban ku idhi. Cabaadka’se naga jooji uunbaan kugu idhi imikana ku leeyahay.
Waxay Xamar siineyso dhalinta reer waqooyi ha siiso ciidamada dalka ku dhibaateysan.